ရည်းစားဦး ~ စန္ဒကူး
အဆိုတော် ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်ရဲ့ သီချင်းတောင် သတိရမိသေး.. မကူးရေ...... :D
အရင်ချစ်သူအကြောင်းတော့ ဘာမှ မပြောတော့ပါဘူး
ကူးရဲ့ အခုချစ်သူက သဘောထားကြီးလိုက်တာနော်။
I really agree above comment!
You are so lucky kuu.
Next time don't ask to vote non-sense question!
He love u much!
ရီရတယ်နော်.. ဟားဟားးးးးးးး ကျေးဇူး မျက်လုံးကို ကျယ်သွားတာဘဲ
၂ခါတောင် ဖတ်သွားတယ် ကူး။
ရည်စားဦးတွေ ပြတ်ကြတယ် ဆိုတာ အများအားဖြင့်တော့ ယောက်ျားလေး ဘက် ကြောင့်ပဲ ဖြစ်တာ များတယ်နော်..
ဒီတစ်ယောက်ကလည်း နောက်တော့ အမေပေးစားတဲ့ မိန်းမပဲ ယူသွားတာပဲ မဟုတ်လား..။
ကူးရေ ဒါ ၂ခေါက်မြောက် လာဖတ်တာပါ :)
အနီရောင်ဝမ်းဆက်နဲ့အခန်းရယ် ကူးကူးကစက်ဘီးနဲ့ပြန်တင်နင်းရတဲ့အခန်းကို အူတက်သွားတယ်။
လက်ရှိချစ်သူကလည်း စိတ်သထားပြည်.လိုက်တာ ။ ကံကောင်းတယ် ။ မလိုအပ်ပဲစိတ်မရှုပ်ရတော့ဘူးပေါ့။
ဒီတစ်ခါ ဆင်ဆာလွတ်သွားတယ်ပေါ့။ :)
ကူးကူးရေ ခုမှလာဖတ်မိတယ်။ တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေက စိတ်ကူးယဉ် ၀ထ္ထုတွေထက်တောင် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ သိပ်မှန်တယ်။ စက်ဘီးစီးတဲ့ အခန်းရောက်တော့ ရယ်လိုက်ရတာ။ ကူးအချစ်ဦးက သနားစရာ ... ရိုးလိုက်တာ ...
နောက်မှ တစ်ခေါက်ထပ်လာဖတ်ဦးမယ်... အဲလိုရေးတာလေးတွေ သိပ်ကြိုက်တယ်။